Arsenal Oo Toos Ula Wareegeysa Odegaard – Balse Shuruud Ayaa Ku Xiran – Garsoore Sports
Arsenal Oo Toos…
Kooxda kubbada-cagta ee Arsenal ayaa eegi doonta xulashooyinka ay Martin Odegaard ugu sii heyn karaan Emirates Stadium xilli-cayaareedka soo aadan.
Mikel Arteta ayaa la dhacay qaab cayaareedka khadka-dhexe tan iyo markii uu amaah uga yimid Real Madrid bishii Janaayo ee horraantii sannadkan.
Toddobaadkii riyada ee Odegaard ayaa wuxuu dhaliyay goolkiisii ​​ugu horreeyay ee kooxda ciyaartii khamiistii la soo dhaafay ay ka adkaadeen Olympiacos wuxuuna raaciyay mid kale guushii ay ka gaareen kooxda ay Arsenal waqooyiga London ku Xifiiltamaan ee Tottenham Axaddii.
Martin Odegaard ayaa sidoo kale loo magacaabay kabtanka xulka qaranka Norway.
The Gunners ayaa u furan inay Odegaard garoonkeeda kusii heyso xilli ciyaareedka 2021-22 – amaah kale ama heshiis joogto ah – waxayna wadahadallo la furi doontaa Real Madrid dhammaadka xilli ciyaareedkan.
Inta badan waxay ku xirnaan doontaa dhaqaalaha ay heli karto Gunners, gaar ahaan haddii ay ku guuldarreystaan ​​inay u soo baxaan horyaalada Europe xilli ciyaareedkan – balse in 22 jirkaan la ilaaliyo hubaashii waa heshiis uu Arteta doonayo inay kooxdu eegato.
Real ayaa u furan inay u ogolaato Odegaard inuu baxo maadaama ay raadinayaan inay maalgeliyaan heshiisyo waa weyn sida saxiixyada Kylian Mbappe ama Erling Haaland.